Iyo App Store muIOS 15 ichavanza kuongororwa kwemapurogiramu akaiswa | IPhone nhau
Zvishoma nezvishoma apuro Iri kugara ichivandudza nekuvandudza chitoro chayo chekushandisa, iyi ndiyo nzira yayinoedza kusimudzira zvakanyanya kunaka kweizvi uye nenzira imwecheteyo yakazvipira kugadzirisa ruzivo rwevashandisi idzo vatengi veApple vaine zvishandiso zvavo, nekudaro vachigadzira ecosystem yepamusoro mhando.
Iye zvino Apple yagadzirisa chimiro cheiyo iOS App Store nekuvanza kufanoona kweavo maapplication atakatogadza isu tichiona zvemukati muApple App. Aya ndiwo mashandiro anoita iyo Cupertino femu kuvandudza ruzivo rwevashandisi muIOS 15, iine izvi zvidiki diki zvatiri kuziva apo isu tichiongorora system.
Isu tacherekedza idzi nhau nekuda kwemushandisi @ilyakuh kubva Twitter, Ilia Kukharev, ndiani atiwana isu sei iyo iOS App Store muIOS 15 inokwanisa kuvanza zviongororwa izvi muchimiro chemaschool of those applications atakatogadza kare. Ichokwadi ndechekuti mashandiro ehunhu ari nyore uye haamiriri kufambira mberi kwechokwadi kana kugadzirisazve muApp App Store, iyo padanho rekugadzira inoramba iri zvakafanana, zviri pachena kuti Apple yakasiya dhirowa renhau ajar panguva ye WWDC.
Kune rumwe rutivi, Apple haigadzirise matambudziko akakura aripo nekuvandudzwa kweIOS 14.6, ino parizvino ndiyo vhezheni yazvino yekambani yeCupertino inoshanda uye iri kunyudza bhatiri revashandisi. Isu takawana zviuru zvekunyunyuta paTwitter uye kunyangwe paApple inotsigira webhusaiti kwatakawana vashandisi, kusanganisira ini, kuti pamberi peOS 14.6 takasvika husiku nemitengo iri pamusoro pe25 / 30% bhatiri, apo isu tatova kujaira kuona iyo tsvuku. bhatiri iro rinotinyevera nezve yakanyanya yakaderera bhatiri danho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » Iyo App Store muIOS 15 ichavanza kuongororwa kwemapurogiramu akaiswa